११ वर्षकी नानीले साना २ भाइबहिनी पाल्दै (भिडियो हेर्नुस्)
/ २०७६, १५ फाल्गुन बिहीबार ०८:४८ प्रकाशीत
काठमाडौं । फागुन १५ सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भावरटोलमा एक परिवार छ जसको ठूलो अभिभावक भनेको नै ११ वर्षीया बालिका हुन् । आमाले छोडेर गएपछि ११ वर्षीया छोरीले भाइबहिनी हेरेर बसेकी थिइन् । बुवा भारतमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण घरमा साना छोराछोरी मात्र छन् । ११ वर्षको छोरीले भाइबहिनी पालेर बसेकी थिइन् । त्यो अवस्थाको बारेमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि भारतमा रहेका बुवा भने अहिले फर्केर आएका छन् । तर उनीहरुको आर्थिक अवस्था भने निकै कमजोर छ । ११ वर्षको छोरीले आफु सहित ४ जनाको भाइबहिनी पालेर बसेकी थिइन् । उनको बुवाले दोस्रो विवाह पछि यि चार छोराछोरी जन्मिएका थिए ।
दलबहादुर दमाई नाम बताएका उनले भने पहिलो विवाह गरेको थिए त्यो श्रीमतीवाट छोराछोरी जन्मिएनन् । त्यसपछि दोस्रो विवाह गरेँ । मेरो र श्रीमतीको उमेरको निकै फरक थियो । मेरो उमेर अलि बढी भइसकको थियो घरमा श्रीमती सुन्दर र भर्खरकी थिइन् । चार छोराछोरी जन्माइन् । चार छोराछोरी र श्रीमतीलाई राम्रो जिवन जिउने बातावरण बनाउँछु भनेर म भारतमा कमाउन गएँ । तर मेरो श्रीमतीले घरमै अरु केटा ल्याउने बस्ने गरेको थाहा पाएँ । भारतमा कमाएको पैसा सबै पठाउँथे आफुले नखाएर बचाएर पढाएको पैसा अरुलाई खर्च गरेर ऋण लगाइछ ।
म भारतको लद्दाकमा थिए । त्यतीबेला नै श्रीमती साना बालबालिका छोडेर पोइला गइछ । त्यसपछि फर्केर आएर एउटा ९ वर्षको छोरा लिएर फेरी भारत गएँ । अलिकति पैसा कमाएर आउँला र छोराछोरीलाई सजिलो जिवन बनाउँछु भनेर गएको थिए । तर मिडियामा यस्तो देखेपछि फेरी फर्केर आएँ । घरमा भएको कुखुरा, बाख्रा, सुनचाँदी सबै बेचेर ऋणमा डुवाएर गइछ । ताजा खबरबाट साभार
सिरहामा युवकको शङ्कास्पद मृत्यु
४. नेपाल नियमित रक्तदाता संघद्वारा ११५ पिन्ट रगत संकलन
५. सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि , कतिमा हुँदैछ कारोबार ?